नयाँ विकास मोडल किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानता । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि पहाडको मरुभूमीकरण ।
पुस ६, २०७८ महेन्द्र पी‍. लामा
एकातिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब र आन्ध्रप्रदेशको विकासमा ढलीमली छ भने अर्कातिर नागाल्यान्ड, अरुणाचल, लद्दाख, दार्जिलिङ, उत्तराखण्ड विकासकै नै खोज तृष्णामा दौडिरहेका छन् । एउटै राष्ट्रभित्र यस्तो छरपस्टै ढाँचा किन होला ? एउटै संविधानभित्र यस्तो विकासरूपी असमानता केले ल्यायो होला ? हिमालय क्षेत्रमा विकासको मूल नफुट्नुका कारणहरू धेरै भए पनि विशेष चार–पाँच वटा विषयलाई नियालेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रथमतः, विकासका आधारमा ऐतिहासिक शृंखला नै खाल्डो पर्‍यो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा रहेका राणा शासन–राजतन्त्रले विकास जनसाधारणकहाँ पुग्नै दिएनन् । लगभग दशकौंसम्म यही सोच रह्यो कि, विकासले जनजीवन उन्नतिशील बनाउँछ र समुदायबीच सचेत–सजीव सोचको बीजारोपण गर्छ जो एकलौटे शासनका निम्ति हानिकारक हुन्छ । पछि गएर यस्तै नयाँ सोचले शोषणयुक्त शासनको जरै उखेलेर फ्याँकिदिन्छ । र नै विकास गर्नै हुँदैन, जनता जनार्दनलाई खुला मैदान दिनै हुँदैन ।
अंग्रेज उपनिवेशवादले भारतमा यही गर्‍यो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जनजातिलाई विकास त के, राष्ट्रदेखि नै टाढा राखिदियो, ‘एक्सक्लुडेड एरिया’ का नाममा । पहाड–पर्वत क्षेत्रमा कसैलाई पुग्नै दिएन, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा । अर्कातिर, भोटाङमा विकासलाई समेत धार्मिक दृष्टिकोणमा रुमल्याएपछि विकासको रूपरेखा र तत्त्व–दिशामाथि धर्मगुरु वा राजाले नै निर्णय लिने भए । धर्मगुरु अनि राजा दुवैले विकासलाई प्रजामा अति नै सीमित रूपमा पुर्‍याए, कम्ती सुविधामा डुबाइराखे, यताउति चल्न–उड्नै दिएनन् । राजतन्त्रको सोच बिस्तारै बदलिँदै गयो, विशेषतः जनता सचेत हुँदै जाँदा । र नै विकासले अलि भिन्न रूप लिन लाग्यो । र फेरि प्रजातन्त्रका कडीहरूलाई नियन्त्रणमै राखेर भए पनि राजतन्त्रले सर्वसाधारणको विकाससम्बन्धी चाहनालाई थिचोमिचोको थुन्सेबाट निकाल्यो ।
दोस्रो, प्रायः हिमालय क्षेत्रले बाटोघाटो, सञ्चार व्यवस्था र संस्थागत मुद्दाहरूमा अति नै पछिल्तिर रहनुपर्‍यो । भारतबाट भोटाङ गएको अंग्रेज सरकारको प्रथम दल डाँडाकाँडा काट्दै हिँडेरै वा गधा–घोडा चढेर पारो र पुनाखा पुगेको थियो । अंग्रेज सरकारले भारतमा सर्भे अफ इन्डिया संस्था बनाएपछि मात्रै नैन सिंह, अला मोहम्मद, उगेन ग्यात्सो, किनथुप लामा अनि हरिरामजस्ता साहसी व्यक्तिहरूले काबुलदेखि काशगर, लेहदेखि खोटान, पिथौरागढदेखि ल्हासा र सिचुवान पुग्ने मार्गहरू हिँडेका–कोरेका–काटेका थिए ।
नेपाल–भोटाङभित्रै मार्ग–सञ्चार व्यवस्था धेरै पछिसम्म नबने पनि गत १९७० को दशकमा विदेशी आर्थिक अनुदानमार्फत धेरै राजमार्ग आदि बने र विकासका झिल्काहरू देखिन थाले । उतापट्टि दार्जिलिङमा भने सन् १८६० को दशकदेखि नै मधेससँग जोडिने हिल कार्ट रोड र १८८० को दशकमै दार्जिलिङ हिमालय रेलवे सुरु गरिएपछि त्यहाँ चिया र सिन्कोना खेती फस्टाएर गयो । अरुणाचल प्रदेशमा — जो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) भित्र पर्थ्यो — गत केही दशकदेखि मात्रै बाटाघाटा र सञ्चार सुविधा देखिन थाले । बाटै नपुगेको क्षेत्रमा, सञ्चार व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा विकास कसरी पुग्ने र पुर्‍याउने ?
तेस्रो, पहाड–पर्वत क्षेत्रबाट विकासका नाममा कोरा माल पाउने र हत्याउने चलन संस्थागत भएर गयो । अंग्रेज सरकारले दार्जिलिङमा चिया र सिन्कोना खेती गरेर लन्डन नै झलमल्ल बनायो । अनेकौं ब्रिटिस कम्पनीले चिया कमान दशकौं चलाए, चिया–सिन्कोनालाई विश्वबजारमा पुर्‍याएर मुनाफामा नुहाए । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय कम्पनीहरूले चिया कमान किने र त्यही गरे जो अंग्रेजी कम्पनीले गरेका थिए । सबै मुनाफा सलल खोलानालाझैं मधेसतिरै बग्दै गए । अझै पछि लुगा–सिमेन्ट–फलामको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले चिया कमान किनेर अड्डै जमाएपछि पहाडमा रहेको अलिअलि चिया खेती र धनसम्पत्ति पनि मधेसतिरै लगे ।
नेपालमा यही भयो, भोटाङमा पनि । मुनाफा ओसारपसार गर्ने एउटै विशेष श्रेणी–वर्गका संस्थाहरू नै जन्मे । पहाड–पर्वतमा व्यापारी–पुँजीवादी (मर्च्यान्ट क्यापिटलिस्ट) को ताँत लाग्यो । सबैको एउटै काम–लक्ष्य— कमाऊ अनि आफ्नै क्षेत्र–महानगरतिर बगाऊ । अर्थात्, दूधको तर (क्रिम) चाहिँ लैजाऊ अनि रहेको त्यहीँ छोडिदेऊ । यसरी नासिए पहाडी क्षेत्रहरू, विकासको तर (क्रिम अफ डेभलपमेन्ट) ओरालै मात्र बगेपछि । अर्थशास्त्रको ‘मल्टिप्लाएर’ यसरी मधेसतिर मात्रै पुग्यो । नेपाल र भोटाङका निम्ति छिमेकी राष्ट्रको मधेसलाई पनि यो विकासको तरले सुसज्जित पार्‍यो । अभाग्यवश, दूधको क्रिम बनाउने र काड्ने खेलमा प्रायः सबै बाहिरतिरबाटै ढिम्केका व्यापारी–पुँजीपतिहरू हाबी भए, पूरा पहाड क्षेत्रमा ।
सिक्किममा त मर्च्यान्ट–क्यापिटलिस्टहरूले नांगो नाच नै प्रदर्शन गरे । टिस्टा र रंगीतको पानीलाई बिजुलीमा परिणत गर्न सन् २०००–१० भित्र दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू त्यहाँ पुगे । भारतको प्रसिद्ध कम्पनी एनएचपीसीबाहेक अरू धेरै कम्पनी त नामै कहिल्यै नसुनिएका । दुबईवरिपरि तेलझैं सिक्किममा पानी, केवल पैसैपैसा भनेर पहाड पुगेकाहरू । तिनताकका राजनीतिक नेतालाई यही चाहिएको; छिटो, मनग्गे र भविष्यै सपार्ने धन–पैसा । चारैतिर सुरुङ खनियो । भ्रष्टाचारको खोला एकातिर, टिस्टा–रंगीत र वरिपरिका समुदाय–समाजका पीरमर्का अर्कातिर । चारैतिर जलविद्युत् परियोजना । नेता–सरकार कम्पनीले लिएको ऋणको ग्यारेन्टीसम्म बसे । नाफा भए व्यापारीको, नोक्सान भए सरकारको ! विकासको नौलो मोडल प्रथम पटक देखियो । आधाजसो विद्युत् कम्पनीहरूले नोक्सानीको गन्ध पाउनासाथ सिक्किमबाटै चम्पट कसे । नेताले कमाए पनि सिक्किमलाई जीवनभरिका निम्ति ऋणको भार बोकाई ती फेरि मधेसतिरै लागे ।
सिक्किम–भोटाङ–नेपालको अदुवा–अलैंची–सुन्तला–अम्लिसो खेती पनि यही ओरालै बग्ने प्रक्रियाले खर्लप्पै खायो । यसरी पहाडहरू प्राकृतिक संसाधन शोषणको चपेटामा रुमलिए । यसअघि अरुणाचल, असम र नागाल्यान्डमा जंगल फाँडेर काठको व्यापार गर्नेहरू पनि कहीँबाट त्यहीँ पुगेका थिए । नेताहरू सप्रिए तर अरू सबैले सधैंका लागि गुमाए । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले यही कारण सम्पूर्ण उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा वनजंगल
काट्नमा कठोर आदेश दिई निषेध नै लगायो । ढुंगा, पानी, बालुवाको पनि यही हालत भयो । प्राकृतिक संसाधन स्वाहा पार्ने यो विकास मोडलमा सबैभन्दा घीनैलाग्दो भूमिका राजनीतिक नेताहरूकै हुँदो रहेछ । सिक्किम र अन्य पहाडी क्षेत्रहरूमा झैं । यसको चौतर्फी प्रभाव पर्दो रहेछ । एकापट्टि प्राकृतिक संसाधन खत्तम, अर्कोपट्टि भ्रष्टाचार र आर्थिक–सामाजिक असमानताको आगमन । अझै परतिर पहाडवासी युवाहरूको रोजगारी वा अन्य पुँजी निवेश गर्ने क्षमतामा आघात । प्राकृतिक प्रकोपको सुरुआत अनि फेरि सम्पूर्ण पहाड क्षेत्रको मरुभूमीकरण ।
चौथो, टाढा रहेको केन्द्र सरकारले सबै राज्यका भूगोल–क्षेत्र–समुदायका निम्ति एउटै योजना बनाउनाले पहाड–पर्वतलाई केही फाइदा पुगेन । राजस्थानको मरुभूमि, विशाखापट्टनमको समुद्रतट, अरुणाचलको बम्डिला र लद्दाखको कारगिलसम्मै जवाहर रोजगार योजना र स्मार्ट सिटी परियोजना । यसरी दिल्लीबाटै सबै योजना बनाएर पहाडमा पनि थोपर्दा दुइटा अचम्मका कुरा हुँदा रहेछन् । पहाडकालाई यस्तो योजना बुझ्न पनि गाह्रो पर्दो रहेछ र ढ्वाङभरि पठाएको धनराशि चम्चाभरिको पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । यो मात्रै कहाँ हो र, यस्ता विकाससँग जोडिएका संघ–संस्था–सरकारी कार्यालय कहीँ त छँदा पनि छैनन् । त, फेरि विकास कसमार्फत दिने !
भोटाङमा नयाँ संविधानमार्फत चुनाव हुन लागेपछि प्रधानमन्त्री दाबेदार रहेका उम्मेदवार पनि गाउँ–बस्ती–पहाड घुम्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि एक जना नेताले मलाई भने— विश्वमा रहिआएको सांख्यिकीअनुसार, भोटाङमा पाइपमार्फत पिउने पानी पाउनेहरूको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । तर चुनाव लड्ने अभियानमा गाउँगाउँ घुम्न जाँदा उनले देखे— कैयौं गाउँ–पहाड–क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव छ, कहीँकहीँ त हाहाकार पनि । सरकारी पानीको पाइपको नामोनिसान छैन । उनी द्विविधामा परे, विश्वमा प्रकाशित सांख्यिकीमा विश्वास गरेर, पानीको पाइप नपाउने ३० प्रतिशतको मात्रै विकास गर्ने कि, आफ्नै आँखाले देखेका, सरकारी पानी नपाउने ७० प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्ने ? थिम्पुमा बनेको विकास योजनाको काठमाडौं र दिल्लीमा बनेका योजनामा झैं यति ठूलो कमजोरी र प्रभावहीनता ।
सिक्किममा नयाँ बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि यही कुराको सामना गर्नुपर्‍यो । अघिको २५ वर्षे सरकारले शतप्रतिशत जनताले सफा पिउने पानी पाएका छन् भनेर ढोलै पिट्यो । केन्द्र सरकारले पनि जाँचै नगरी यो कुरा मानिलियो र विभिन्न मञ्चमा गुड्डी हाँक्न थाल्यो । नयाँ सरकारले आउनासाथ यसबारे जाँच गर्‍यो अनि थाहा पायो— यो कुरो त सीधासीधा तथ्यहीन रहेछ । अझ पिउने पानीका निम्ति केन्द्र सरकारबाट केही नपाउँदा झन् धक्का लागेपछि अहिलेको सरकारले पिउने पानी नपाउनेहरू यति छन् भनेर भन्नै कर लाग्यो । अर्थात्, पहिलेका नेता र सरकारले यश कमाउनका लागि सांख्यिकीमा समेत लुकाइ–छिपाइ गरेका रहेछन्, पाकिस्तान र बर्मामा सैनिक शासनले गरेझैं ।
पाँचौं, पहाड क्षेत्रको विकास नहोस् भन्नेहरू पनि छन् क्यारे । किनकि विकास नहुँदा सरकारले पठाएको विशेष कोष र वित्तीय फाइदा हडप्न सकिन्छ । सिक्किम भारतको राज्य बनेपछि सन् १९७५ देखि नै त्यहाँ केन्द्र सरकारको कर आदि नलाग्ने भयो । ‘एक्साइज ड्युटी’ नलागेपछि अनेक थरीका कम्पनीहरू त्यहाँ गई सिगरेटदेखि क्रिम पाउडरसम्म उत्पादन गर्न थाले । कारखानाका नाममा सानो कार्यालय मात्रै खोले, कारखाना अरू नै ठाउँमा रहे । सिक्किममा केवल कागजपत्रमा मात्रै ठप्पा लगाएर त्यहीँ बनाएको घोषणा गर्न थाले । यस्तो भयानक काण्ड थाहा पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यहाँ एक्साइज ड्युटी लागू गर्‍यो । रातारात कारखाना बन्द भए, सिक्किम फेरि हप्तैभित्रमा रित्तो भयो ।
अहिले पनि यस्तै हुँदै छ कि क्या हो, आशंका छ । भारत सरकारले पहाडी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाहरू खोलिऊन्, भारतका अन्य राज्यबाट पुँजी निवेशकर्ताहरू त्यहाँ जाऊन् भनी धेरै प्रकारका छुट र सरसुविधा अघि राख्यो । सन् १९९७, २००७ र २०१७ मा विभिन्न प्रभावशाली एवं आकर्षक नीति कानुन बनायो पनि । यसअन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्रका असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश र मिजोरममा प्रायः अरू क्षेत्रबाट गएका कम्पनीहरूले मात्रै सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ७९६६ करोड भारुको आर्थिक सहायता पाए ।
योबाहेक यी कम्पनीहरूले आयकर आदिमा वर्षौंसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । यति अनुदान–वित्तीय सहायता पाएर पनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको स्थितिमा भनेजस्तो हेरफेर आएको छैन । सिक्किममा मात्रै ५५ भन्दा बढी औषधि कारखानाहरू खुले पनि सिक्किम सरकारको राजस्व–आयमा यी कम्पनीहरूको योगदान नगण्य छ र रोजगारीमा पनि कुनै ठूलो प्रभाव छैन । यदि सन् २०२२ मा भारत सरकारले यस्ता नीतिहरूलाई खारेज गरेको खण्डमा त्यहाँ गएका र खुलेका कम्पनीहरू पनि रातारात बन्द होलान् भन्ने भय पनि छ नै ।
भोटाङ, नेपाल र भारतका पहाडी राज्यहरूको विकास नहुनु भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा नै खतरामा पर्नु हो । प्राकृतिक संसाधन अझै नाश हुनु हो; पहाडवासीहरूको पलायन द्रुत गतिमा हुनु हो; पारम्परिक खेतीपाती, औषधीमूलोको ज्ञान भण्डार र समाज–संस्था आदि स्वाहा भएर जानु हो र बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउनु हो । यसर्थ भारतमा केवल पहाड–पर्वत क्षेत्रहरूका विकासका निम्ति एउटा छुट्टै र सग्लो मन्त्रालय बनाइनैपर्छ अनि त्योभित्र पनि यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, दक्षताप्राप्त एवं संस्थासँग जडित लोक सेवा आयोग आदिद्वारा खटाइएका व्यक्तिहरू सामेल गरिनुपर्छ ।
नेपाल–भोटाङ–भारतका पहाडी क्षेत्रहरूमा विभिन्न आर्थिक–सामाजिक–पर्यावरण–वैज्ञानिक–वित्तीय–योजना–उद्योगधन्दा–कृषि–शैक्षिक–स्वास्थ्य आदि केन्द्रित आधुनिक संस्थाहरू निर्माण गरिनैपर्छ र यी संस्थाहरूलाई विकासको मूल फुटाउने नीति बनाउने र दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा दिइनुपर्छ । विश्व बैंकजस्ता वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका तोकिनुपर्छ । पहाडवासीहरूले प्रजातन्त्रको चोखो फाइदा पाएकै छैनन् । कारण, उनीहरू केन्द्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पहाडसँग जोडिने सबै संसाधन–यन्त्र–तन्त्र आदिलाई विस्तीर्ण एवं गहिरो रूपमा अघि बढाउन नीति कार्यान्वयन गरिनैफर्छ ।
प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:२०